कच्चा फारस्टेन (566-48-3) HPLC≥98% | AASraw
/ उत्पादन / अरूलाई / पूर्वनिर्धारित (566-48-3)
SKU: 566-48-3. श्रेणी: अरूलाई
AASraw संश्लेषण र उत्पादन को क्षमता संग gram बाट Formestane (सीएएस 566-48-3) को सीजीएमपी विनियमन र ट्रयाकिड गुणस्तर नियन्त्रण प्रणाली अन्तर्गत छ।
प्रारम्भिक ओइडर पहिलो चुनिंदा थियो, पछि टाइप, स्टेरॉयडल aromatase अवरोधक को लागी एस्ट्रोजन-रिसेप्टर सकारात्मक स्तन क्यान्सर को उपचार पछि प्रयोग माइनोपॉसेल महिलाहरु मा। पूर्वनिर्धारित एनालिकल स्टेरियोड्स वा प्रोहोर्मोनहरूबाट एस्ट्रोजेन उत्पादनलाई दमन गर्छ। यो 4-हाइड्रोक्साइटोस्स्टेरोनमा प्रोहोर्मोनको रूपमा कार्य गर्दछ, ...
पूर्वनिर्धारित आधारभूत क्यारेक्टरहरू
पिघल प्वाइन्ट: 199-202 ° C
स्टेरियोड्स चक्रमा प्रयोगका आधारभूत (566-48-3)
पूर्वनिर्धारित (566-48-3), लेन्टोनोन भनिन्छ, रासायनिक नाम: 4-hydroxyandrostenedione।
पूर्वनिर्धारित (566-48-3) प्रयोग
फर्मेनटेन बेचेको सबै भन्दा साधारण संस्करण एक टोपी जेल जेलमा थियो र यो 100-200mgs प्रति अनुप्रयोगमा बन्द गरिएको थियो। प्रयोगकर्ताहरूले यसलाई सफा, सुकेको छाला र राम्ररी मा रगतमा लागू गर्दछन्; सामान्यतया जांघ वा माथिल्लो हातमा। यसले 1 लाई5मिनेटमा सुक्खायो। स्तनपान क्यान्सर उद्देश्य र बडी बहालको दुवै इंजेक्शन योग्य संस्करण प्रति हप्ता दुई पटक 125mgs वा 250mgs प्रति हप्ता एक पटक हो।
Formestane मा चेतावनी
Formestane (सीएएस 566-48-3) दुर्व्यवहार नभएसम्म धेरै साइड इफेक्टहरू हुन सक्दैन। कहिलेकाहीं शरीर निर्माणकर्ताहरूले सुक्खा जोडहरू, मूड झन्डाहरू, लाइबेरिया परिवर्तनहरू, वा भान्साहरू, जुन सबै ए.एन. को ठेठ हुन्छन्। अर्को साइड इफेक्ट एचडीएल (राम्रो) कोलेस्ट्रल हो, त्यसैले तपाईले तपाईंको आहार हेर्नु पर्दछ।
Formestane दोस्रो दोस्रो हो, अपरिवर्तनीय, स्टेरॉयडल aromatase अवरोधक। यसले एस्ट्रोजेज एंजाइमलाई एण्ड्रोजन उत्पादन को रोकथाम गर्न को लागी एन्ड्रोन्स को एस्ट्रोगेन को बदलन को लागी जिम्मेदार ठहराव गर्दछ।
स्तन कैंसर एस्ट्रोजेन संवेदनशील वा अपमानजनक हुन सक्छ। स्तनपान गर्ने अधिकांश स्तन एस्ट्रोजन संवेदनशील हुन्छन्। एस्ट्रोजन संवेदनशील स्तन क्यान्सर सेलहरू व्यवहार्यताका लागि एस्ट्रोजनमा निर्भर हुन्छन्। यसैले शरीर बाट एस्ट्रोजन को हटाउन हार्मोन संवेदनशील स्तन कैंसर को लागि एक प्रभावी उपचार हुन सक्छ।
पोष्टमेनपोसाल महिलाहरूको उपचारको लागि विशेष रूपमा लक्षित गरिएको हो। अंडामा सबैभन्दा अधिक एस्ट्र्रोजन उत्पादन गर्ने पूर्वयुनिज महिलाहरूको विपरीत, पोष्टमेनपोसालल महिलाहरु परिधीय ऊतकहरुमा अस्ट्रोजन उत्पादन गर्दछ जो aromatase एंजाइम को सहायता संग। प्रारम्भिक (566-48- 3), एक aromatase अवरोधक, हार्मोन संवेदनशील स्तन क्यान्सर को उपचार गर्न परिधीय ऊतक (यानी स्तन को adispose ऊतक) मा aromatase एंजाइम रोक्न एस्ट्रोजन को स्थानीय उत्पादन मा कमी गर्न सक्छन्।
कसरी AASraw बाट Formestane किन्नुहोस्
Dyclonine एचसीएल पाउडर